विवाहको प्रस्ताव राख्दा हत्या ! - Everest Dainik - News from Nepal
विवाहको प्रस्ताव राख्दा हत्या !
ताप्लेजुङः मंसिर १७ गते विहान ५ नबज्दै मन्दिरा अधिकारी उठिन्। घर कसिंगर गरिन्। आगो जोडिन्। चिया पकाइन्। अनि आमा कृष्णमायालाई बोलाउन ओछ्यानमै पुगिन्। सधैं ढिलो उठ्ने छोरी आफूभन्दा पहिले उठेर बोलाउँदा आमा दंग परिन्।
याे पनि पढ्नुस बझाङमा युवक हत्या प्रकरणः वडाध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ
मन्दिरालाई बेपत्ता पारेको अभियोगमा दाजु नाताका रमेश अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरुबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। रमेशले बयानमा मन्दिराको हत्या गरेको स्विकारेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘मन्दिरा र मेरो दुई वर्षदेखि प्रेम थियो। उसले बिहे गरौं भनेर दबाब दिइरहेको थियो। हामी दुवै अधिकारी भएकाले बिहे गर्न मिल्दैनथ्यो।
त्यसैले मारिदिएँ’, रमेशको बयान उदृत गर्दै प्रहरीले भनेको छ। मन्दिराको शव नभेटिएकाले प्रहरीले रमेशलाई व्यक्ति बेपत्ता पारेको अभियोगमा मुद्धा दायर गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
याे पनि पढ्नुस सुशान्तपछि अर्का अभिनेता मृत भेटिए, हत्या कि आत्महत्या ?
दिदीकै फेसवुकमा फेरि दलित थरका युवकले आफूलाई भारत पुर्याएको भनेर अर्को मेसेज आयो। सो मेजेस रमेशले पठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। वेपत्ता भएकै दिन चोकपुरस्थित उनको घरबाट करिव ४० मिनेटको पैदल दुरीमा रहेको तमोर नदी किनारको मित्ला खेतमा लगेर हत्या गरी पुलबाट नदीमा फालिदिएको रमेशले प्रहरीसमक्ष बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
ट्याग्स: मन्दिरा अधिकारी, रमेश अधिकारी, विवाह प्रस्ताव, हत्या
१५ मिनेटपछि बस्नेगरी प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई वर्षमानले भने– खराब काम गरे पार्टीले कारबाही गर्छ